MPT SIM card ကို အွန်လိုင်းကနေ Register လုပ်ပုံလုပ်နည်း - Myanmar End User
By Myanmar End User November 16, 2016 52555 views
MPT SIM card များကို အွန်လိုင်းကနေ Register လုပ်ပုံလုပ်နည်း
Ooredoo SIM Card ကို အွန်လိုင်းကနေ Register လုပ်ပုံလုပ်နည်း | Telenor SIM Card ကို အွန်လိုင်းမှ Register လုပ်ပုံလုပ်နည်း
MPT SIM Card မှတ်ပုံတင်ခြင်း
အချိတ်အဆက် ပွင့်လို့ MPT site ကိုရောက်ပီဆို အရင်ဆုံးမြင်ရမှာက Sign In စာမျက်နှာပါ။
Sign In ပြုလုပ်ရန်
အဲဒီစာမျက်နှာမှာ အကောင့်လုပ်ပြီးသားဆိုရင်တော့ မိမိလုပ်ပြီးသား အကောင့်ဖြင့် Sign In ပြုလုပ်ပါ။ အကောင့်မလုပ်ရသေးပါက Sign Up ကို ဖွင့်၍ Sign Up ပြုလုပ်ပါ။ Sign Up ပြုလုပ်ပုံကို အောက်မှာ ဆက်ကြည့်ပါ။
Sign In စာမျက်နှာမှ Sign Up ကို နှိပ်လိုက်ပါက မြင်ရပုံ
Sign Up form ရဲ့ Mobile Number ဆိုတဲ့ နေရာမှာ မိမိ မှတ်ပုံတင်မယ့် MPT ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ။ Password နေရာမှာ မိမိ အသုံးပြုမယ့် Password ကို ထည့်ပါ။ Repeat Password နေရာမှာ အပေါ်က Password ထည့်ထားတဲ့ နေရာမှာ ထည့်ထားတဲ့ Password ကို ပြန်ထည့်ပါ။ Verification Code နေရာမှာတော့ အရင်ဆုံး အဝါရောင် Get လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အပေါ်မှာ ဖြည့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို Code ပို့ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အဲဒီ SIM Card ကို ဖုန်းထဲထည့်ထားဖို့လိုပါမယ်။ SMS ဖြင့် Verification Code ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ SMS မှ Code ရရှိပါက Verification Code နေရာမှာ ထည့်ပါ။ အားလုံးဖြည့်ပြီးပါက Registration ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အကောင့်ပြုလုပ်ပြီးပါက Sign In စာမျက်နှာကို ပြန်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ် မရောက်ပါက ကိုယ့်ဘာသာပြန်သွားပါ။ Register ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ Password ကို ရိုက်ထည့်ပြီး Sign In ဝင်ပါ။ Sign In ဖြစ်သွားပါက Menu မှာ My Information ကို ရှာပါ။ My Information မှ Customer Profile ကို ဖွင့်ပါ။ အောက်ပါ ပုံကို မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
MPT Customer Profile
Custom Name မှာတော့ မိမိနာမည် သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ NRC/Passport Number မှာတော့ မိမိ မှတ်ပုံတင်ကတ်နံပါတ် သို့မဟုတ် Passport နံပါတ်ကို ထည့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်ပြီးပါက OK ဖြင့် Save ပါ။ ပြီးပါက အောက်က ပုံကို ဆက်ကြည့်ပါ။
မှတ်ပုံတင်ကို Upload ပြုလုပ်ရန်
ပုံမှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Upload လုပ်မယ့် ပုံရဲ့ အများဆုံး ပမာဏက3Mb ပဲရှိရပါမယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါ Resolution လျော့ရိုက်ဖို့လိုပါမယ်။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ရင်တော့ Upload your NRC front-side image ကို နှိပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ရဲ့ အရှေ့ဘက်ခြမ်းကို ရွေးပေးရမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ Upload your NRC back-side image ကို နှိပ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ရဲ့ အနောက်ဘက်ခြမ်းကို ရွေးပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို MPT SIM Card မှတ်ပုံတင်ခြင်း အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ အဆင်မပြေမှုများ ရှိပါက Comment မှ မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Pan Myat Mon says:
28 November, 2016 at 8:43 am
how can I know whether registration of my sim card is successful?
SIM Card ကိုင္ေဆာင္သူရဲ႕ မွတ္ပံုတင္ေရွ႕ဘက္ ေနာက္ဘက္ တင္ထားျပီးရင္ ရပါျပီ… က်န္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြက မျဖည့္လည္း ရပါတယ္… ျဖည့္ထားေတာ့လည္း ေကာင္းတာေပါ့…
18 January, 2017 at 5:11 am
တင္ျပီးမတင္ရေသးတာကို ဘယ္လို ျပန္စစ္နိုင္မလဲ
MPT ရဲ႕ Call center ဖုန္းနံပါတ္ျဖစ္တဲ့ 106 ကို ေမးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္…
22 January, 2017 at 1:41 pm
register success ျဖစ္မျဖစ္ျပန္ check လုပ္တဲ့ code number ေလးသိခ်င္လိုပၚ
23 January, 2017 at 3:59 am
မွတ္ပံုတင္ေတြ upload လုပ္ျပီးရင္ ရပါျပီ… ပုိ႔စ္မွာ ေသခ်ာေလး ေရးေပးထားပါတယ္…
18 February, 2017 at 7:03 pm
20 February, 2017 at 8:32 am
27 February, 2017 at 9:40 am
https://care.mpt.com.mm/ ( MPT မွတ္ပုံတင္ရန္ လင့္ ) စစ္ေဆးရန္ *601#
https://ecaf.telenor.com.mm ( Telenor မွတ္ပုံတင္ရန္ လင့္ ) စစ္ေဆးရန္ *979*3*3#
3 March, 2017 at 4:31 am
CDMA800 register successျဖစ္မျဖစ္ဘယ္လိုျပန္ႀကည္႕ရပါသလဲ*601#နဲ႕စစ္တာမရလို႕ပါ
3 March, 2017 at 8:08 am
MPT ရဲ႕ Call center နံပါတ္ျဖစ္တဲ့ 106 ကို ဖုန္းေခၚဆုိ ေမးၾကည့္လုိက္ပါခင္ဗ်ာ…
thuzar Wai says:
25 May, 2020 at 9:14 pm
i cannot register. my sim card show ‘your sim card have been blocked’.